Cunnada Africa -
Ginger Ginger waa xidid geed. Waxay ka mid tahay waxyaalaha udgoon ee loo adeegsado Galbeedka Afrika. Waxaa loo isticmaali karaa kalluunka iyo suugada hilibka. Wuxuu soo weriyey ... Akhri wax dheeraad ah
Waa diyaarin lagu shubay foil ka sameysan caleemo mooska, oo loo kariyo lagu kariyo midkood foornada, ama si toos ah loogu shubay xabbad dusheeda ah ... Akhri wax dheeraad ah
Diyaarinta: Ku rid qaybaha jiiska roodhiga ah ee biyo qabow, ku dhaq mar walba oo jiiska riig ah iyo meel digsi ah. ! Samee niknoolajiyada faraha badan ee ariga ... Akhri wax dheeraad ah
Deeqyada waxaa la sameeyaa bur iyo sonkorta oo la isku shiilo saliid kulul: Tilmaame-barahani waa mid fudud oo fudud oo loogu talagalay samaynta qalalan Afrika, waxaad ... Akhri wax dheeraad ah
Tilapia waa kalluunka biyaha la cabbo oo leh hilib cad oo adag iyo qadar yar oo lafaha ah. Waa kalluun hodan ku ah fitamiin B, C iyo fosfooras. Karinayo ... Akhri wax dheeraad ah